မွတ်စ်လင်နှစ်သစ်ကူးညဥ့်ပြီးနောက်တက်သ | Apg29
Surfar nu: 856
နှစ်သစ်ကူးညဥ့်အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်ပြီးနောက်မွတ်စ်လင်ဂို၏လမ်းများကို clean up ။ မိုဟာမက်နှစ်ဦးစလုံးအမိန့်များနှင့်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏နာမ၌အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များဆောင်ရွက်သော်လည်း - နိဂုံးငါကအမြဲတမ်းသွေးထွက်သံယိုမွတ်စ်လင်အကြမ်းဖက်ဝါဒပြီးနောက် "ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာမဟုတ်ပါဘူး" ကိုကြားသောကြောင့်ယူရှိသည်။
ငါကမွတ်စလင်ပြီးနောက်ကို clean up ရမယ်သောကိုရမ်ကျမ်းထဲမှာပြောပါတယ်လျှင်မသိရပါဘူး ဆွီဒင်နှစ်သစ်ကူးညဥ့် , ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းကိစ္စများအတွက်မဆိုတစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခု, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကသူတို့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏နာမ၌သတ်ပစ်သင့်ကြောင်းပြောပါတယ်ကွောငျးသိရနှင့်မိုဟာမက်အများကြီးသေလွန်သောသူတို့သည်လူတို့နှင့်အတူတစ်စစ်ဘုရင်ခဲ့ကြောင်း မိမိအသြတ္တပ္ပစိတ်ပေါ်မှာ။
မွတ်စ်လင်ဆော်ဒီ Barbary ခုနှစ်တွင်လူ 150 ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရသည် beheading တနေ့အတွက်အထွတ်အထိပ်7avhuvningar နှင့်အတူ, 27 ယင်းသို့ခေါင်းဖြတ်စီရင်ခြင်းဖြင့်ဇူလိုင်လအတွက်အထွတ်အထိပ်နှင့်တကွ, လတွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 13 ခေါင်းဖြတ်ရှိလိမ့်မည် 2018. တွင်။
ဒီဇင်ဘာလ 2018 အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏နာမ၌ 801 ဦးသေဆုံး
Image ကိုရင်းမြစ်: petterssonsblogg.se ။
ဒီဇင်ဘာလ 2018 ခုနှစ်တွင်ဦးသေဆုံးပြီး 801 လူတွေကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏နာမ၌ကွဲပြားခြားနားသောမွတ်စ်လင်အကြမ်းဖက်ဝါဒ၌တည်၏။
ဘယ်အချိန်မှာ နှစ်ခုစကင်ဒီနေးအမျိုးသမီးတွေခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမော်ရိုကိုတွင်, ဘုံကဆိုပါတယ် ဂါထာ "ဒီ, အစ္စလာမ်ဘာသာမဟုတ်ပါဘူး" ဒါပေမယ့်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှစ်သက်လိုလားခဲ့သူကလုပ်ခဲ့တယ်ခဲ့သူမွတ်စလင်များသစ္စာစောင့်၏။
ယရှေုသညျအကြှနျုပျတို့သညျမိမိနာမ၌တစ်စုံတစ်ဦးကိုသတ်ပစ်သင့်ကြောင်းပြောပါတယ်ဘူး။ အဲဒီအစားသူကနောက်ကျောက၎င်း၏အိမ်မှသို့ဓားကိုကပ်သင့်ကြောင်းပေတရုအားမိန့်တော်မူ၏။ ဤသည်ယေရှု၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်မိုဟာမက်နှင့်အတူပြုလုပ်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုသည်။ သူသတ်နှင့်ကိုယ်တော်တိုင်ဦးသေဆုံးပြီးနှင့်အခြားသူများအတူတူပြုပါလိမ့်မယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့တပည့်တို့၏ဘာသာတရားမနှိုင်းယှဉ်သင့်ပါတယ်။
အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုနဲ့မိုဟာမက်, ဒါမှမဟုတ်သမ်မာကမျြး၏သခင်နှင့်ကိုရမ်ကျမ်း၏အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်နှိုင်းယှဉ်။ ထိုအခါမှသာသူတို့ကစုစုပေါင်းဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးချင်းစီနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှိကြောင်းကိုကြည့်ပါ။
ကြည့်ရှုပါ / ကိုလည်းဖတ်ရန်:
ယေရှုနဲ့မိုဟာမက်အကြား7ကွဲပြားခြားနားမှု
ယေရှုနဲ့မိုဟာမက်အကြားတစ်ဦးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (ပြင်ပ link ကို)
မွတ်စ်လင် '' နှာခေါင်းအပေါ် Strumming?
အဘယ်ကြောင့်ငါသည်ဤဆောင်ခဲ့ပါသလဲ? ဒါကြောင့်မွတ်စ်လင် '' နှာခေါင်းအပေါ်ဖမ်းယူဖို့ရှိပါသလား? လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်ယာန်တွေဟာကအကြောင်းတကယ်ကဘာလဲဆိုတာနားလည်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဒီကိုတက်စေ။ ယေရှုနဲ့မိုဟာမက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်မဟုတ်။ သခင်ဘုရားနှင့်, အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်ဆင်တူသည်မဟုတ်။ ဒါဟာနတ်ဘုရားတို့၏အကြောင်းကိုနှစ်ခုကိုမတူညီတဲ့မျိုးပါပဲ။
မွတ်စလင်ကျွန်တော်ကိုချစ်ပြီးယရှေုကိုအနိုင်ရသင့်ပါတယ်။ မွတ်စ်လင်အပါအဝင် - ရှိသမျှတို့ကိုယေရှုသည်လူများအတွက်တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်စ်လင်ကိုဘုရားသခငျလွန်စွာချစ်သောသူကလူဖြစ်ကြ၏။
ယရှေုသညျငြင်းဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမဦးစွာအစ္စလာမ်ဘာသာဟာအလွန်အန္တရာယ်များဘာသာတရားဖြစ်ပါတယ်။ ယရှေုသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောမဟုတ်ပါငြင်းပယ်ထားပါတယ်။ သူတို့လည်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဒီတော့ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျယရှေုခရစျသ ပတ်သက်. မွတ်စ်လင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုပြောပြလိမ့်မယ်။
ကောင်းသောသို့မဟုတ်မကောင်းသောအခြင်းရှိမရှိသင်တို့မူကား, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျင့်ကိုမှတဆင့်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းသခင်အဖြစ်သညျယရှေုကိုလက်ခံရန်ဖြစ်ပါသည်။
အခုတော့တစ်စုံတစ်ဦးကိုယရှေုသညျကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၌တည်ရှိ၏ဟုပြောပေလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအပြောအဆိုအားဖြင့်အရူးလုပ်ခံရမထားပါနဲ့။ ကသမ္မာကျမ်းစာသညျယရှေုကိုမခံဖြစ်၏။ ကုရ်အာန်ဟာလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောသညျယရှေုကိုပင်သမ္မာကျမ်းစာသညျယရှေုဆန့်ကျင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုမွတ်စ်လင်လူမျိုးအပေါင်းတို့အဘို့အပေါင်းတို့နှင့်တကွကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုများအတွက်သမ္မာကျမ်းစာယေရှုအကြောင်းသင်တို့ကိုပြောပြပါရစေ။ သူတို့ကသူ့ကို၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီရမယ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ထိုအခါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့ထပ်မံအချက်များထဲကယေရှုအကြောင်းပြောပြရန်ရှိခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်, ယရှေုသညျမွတ်စလင်အိပ်မက်အတွက်ကိုယ်တော်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြသကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ခြွင်းချက်မရှိဘဲစည်းမျဉ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအဖြစ်ပျက်ကိုကျမ်းစာထဲမှာမပါဟူသောဂတိတော်သည်။
ယရှေုသညျအကြှနျုပျတို့ကိုထုတ်သွားနှင့်ရှိသမျှသောဝေနေယျသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောသင့်ကြောင်းဆင့်ဆိုလေ၏။ ဤရွေ့ကား, ကျွန်ုပ်တို့သည်သမ္မာကျမ်းစာသညျယရှေုမွတ်စလင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းကောင်းပြောပြရမယ်လို့လည်းမှန်သည်။
Vecka 25, måndag 17 juni 2019 kl. 01:02
söndag 16 juni 2019 19:20
Ber för en familjesituation. Ber för både frid och god ekonomi.